Somaliland oo shaacisay eedeymo yaab leh oo uu u xiran yahay weriye Coldoon - Caasimada Online
Home Somaliland Somaliland oo shaacisay eedeymo yaab leh oo uu u xiran yahay weriye...
Hargeysa (Caasimada Online) – Xafiiska Xeer Ilaalinta Somaliland ayaa soo bandhigay eedeymo uu sheegay in markale loo xiray Wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo sidoo kale ah Samafale ka shaqeeya arrimaha bini-aadantimada.
Coldoon ayaa xabsiga loo taxaabay taariikhdu markay aheyd 23/08/2021, waxaana kamid ah eedeymaha loo haysto Dacaayad Qaran Dumisnimo ah, Faafinta Warar Been Abuur ah iyo Aflagaadeyn Siyaasiyiinta Golaha Sharci Dejinta Somaliland.
Qoraalka kasoo baxay Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in Coldoon uu ku kacay Ceebayn ka dhan ah Iskuulada Abaarso, Jaamacada Barwaaqo iyo ardeyda dhigata, kuwaasi oo uu sheegay in lagu dhigto wax ka baxsan dhaqanka suuban iyo shareecada Islaamka, sida lagu sheegay qoraalka.
Inta badan cadeymaha loo cuskanayo eedeymaha Coldoon ayaa waxaa laga soo min-guuriyay qoraaladiisi uu ku qori jiray bartiisa Facebook.
“Waxaa faafisay dacaayaado qaran dumisnimo ah adigoo sheegay in Abaarso iyo Jaamacada Barwaaqo la keenay bulshada aduunka ugu guracan ee sameeya waxa uu bila’aadanku daaye xayawaankuna ka xishoodo oo ah in uu Labku Labka u tago, Dhadiguna dhadiga u tago, arrintaas oo dacaayad aad u shaki galinaysa waxbarashada Somaliland.”
“Waxaa Maxkamadda ka codsanaynaa inay noo mudeyso, noona cayinto goorta iyo wakhtiga la dhageysan doono dacwadan, soona saarto talaabooyinka kale ee la xidhiidha dacwadan,” ayaa ugu dambeyntiina lagu qoraalka.